Colossus-kii Apennines ee Florence, Talyaaniga | Abuurista khadka tooska ah
Tani farshaxanimada epic of colossusNin badh iyo buur badh, waxaa la dhisay dabayaaqadii 1500s iyada oo loo sameeyay farshaxan yahanka caanka ah ee reer Talyaani Giambologna oo astaan ​​u ah Buuraha Apennine ee Talyaaniga.
Ilaaha buuraha, oo loogu magac daray Apennines, wuxuu u yimaadaa 10 mitir sare dusha sare ee Vila de Pratolino ee Tuscany. Taaladaan weyn waxaa ku qarsoon qarsoodi cajiib ah oo leh dhowr qolal taxane ah oo shaqooyin kala duwan leh taas oo u ogolaatay in barxadan la dhigo meeshan gaarka ah.
Raga weyn ayaa gacanta bidix ku haya il biyood oo ka imanaya durdurka dhulka hoostiisa mara. Thanks to moodel, waxaan ku baran karnaa qolalka ku dhex yaal, marka laga reebo maxay yihiin sawirro taxane ah oo halkaas lagu qaaday.
Tani waxay ku taalaa Pratolino Park, hal mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan gobolka ku xeeran Florence. In kasta oo magaalada inteedii badnayd iyo jardiinadii la baabi'iyay, iyadoo taallooyin qaar wali taagan yihiin, haddana waa la qiyaasi karaa quruxda iyo sixirka ay ahayd inay ku jirtay xilligeeda.
Colossus-ka Apennines waa lagu abuuray dhagax iyo dhoobo oo waxay lahayd dhowr frescoes oo qurxin jiray qolalka gudaha ku jira.
Beer gaar ah oo lagu dhex socdo si loo helo farshaxankan oo loo soo bandhigo qofka jidka marayan dhammaan xooggiisa muuqaalkiisa iyo sida ay u ilaalineyso ishaas dabiiciga ah ee biyaha sidii iyadoo si uun u ilaalinaysa. Sawir gacmeed dhan oo cabbirkiisu aad u weyn yahay kaas oo dalxiiskiisa ay yihiin dhowr tusaale oo wali ku sii jira waqtiga, in kasta oo waqti dheer laga soo wareegay tan iyo markii uu abuuray farshaxanka reer Talyaani ee Giambologna.
Haddii aad waligaa nasiib u yeelato inaad ka gudubto aagga, baarkinka furan yahay maalmaha Jimcaha, Sabtida iyo Axadaha ilaa dhamaadka bishan. Mid aad uga duwan kuwii aan todobaadkii hore ku tusnay la Mueck.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Farshaxanka weyn ee ku yaal Florence oo qarinaya qolal kala duwan
ubaxa ubaxa dijo
Qurux badan. Hibada Eebbe siiyay bini-aadamka waa wax lagu farxo. Cajiib ah.
Jawaab Azucena Ramos